Qorannoon lammii Eertiraa Itoophiyaatti achi buuteen dhabame akka xumuramu ajajame - BBC News Afaan Oromoo
Qorannoon lammii Eertiraa Itoophiyaatti achi buuteen dhabame akka xumuramu ajajame
Madda suuraa, ISAIAS TEKIE
Waggoota lama dura namni Ermiyaas Takihee jedhamuufi dhalataa Eertiraa, lammiidhaan ammoo Siwiidin irra kan ta'e magaalaa Istookoolmirraa ka'ee Finfinnee galuun torban lama keessatti achi buuteen isaa dhabame ture.
Abbaan alangaa Itoophiyaas qorannoon dhimma Erimiyaas hanga danda'ametti saffisaan akka xumuramuuf ajaja kennuusaa Siwiidinitti abokaatoo Ermiyaas kan ta'an Obbo Musee Efireem BBC'tti himaniiru.
Abbaan alangaa waliigalaa qajeelfama kana kan dabarse, xalayaa Komishinii Poolisii Finfinneetti Komishinara Itti-aanaa Qorataa Yakkaafi Balaa Tiraafikaaf ergeen ture.
Xalayaa A L I Sadaasa 3/2012 barreeffame kanas BBC'n kan argate yoo tau, "Qorannoon kun galmaa'ee adeemsarratti kan jiru yoo ta'e, dhimmoota yakkaa adda addaa isaa ilaallatu waliin ta'uudhaan qorannoon jalqabame hanga danda'ametti saffisaan xumuramee namoonni yakka raawwatan haalli itti gaafataman raawwatamuu qaba," jedha xalayicchi.
Reenfii Kaashogjii 'Asiidiin bulbulame'
Taphattoonni Ertiraa Yugaandaatti baqatan 'sodaa keessa jirra' jedhan
Obbo Museen qajeelfamni abbaan alangaa Jimaata A L I 10/2012 akka isa ga'e himuun, kun ammoo akka abdii isaanitti hume dubbatu.
"Adeemsa hanga ammaatti deemneen seera biyyattii hordofnee deemaa turre. Haata'u malee, jijjiiramni kanaan booda argamu yoo hin jiraanne obsi keenya waan dhumeef Gamtaa Afrikaatti Komishinii Mirgoota Namoomaatti iyyannoo keenya dhiyeeffanna, jedhan.
Maatiifi abokaatonni Ermiyaas Takihee Poolisiin Itoophiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennuun garee qorattoota beekumsaafi muuxannoo qaban gurmeessuun qorannoo kana gadi fageenyaafi saffisaan akka gaggeessuuf qajeelfamni akka itti kennamu xalayaa A L I Onkoloolessa 2012 barreessaniin agarsiisaniiru.
Dhalataa Eertiraa lammiidhaan ammoo Siwiidiin kan ta'e Ermiyaas Tekihee eenyu?
Ermiyaas dhaloonni isaa Eertiraa yoo ta'u, lammummaan isaa ammoo Siwiidiniidha.
Ermiyaas kan Finfinnee gale A L I Ebla 26, 2010 yoo ta'u, A L I hanga Caamsaa 13, 2010'tti hoteela Ark kan Finfinneetti argamu keessa tureera.
A L I Caamsaa 13, 2010 halkan keessaa tilmaamaan naannoo saatii afurirratti namni Daahilaak (Efireem) jedhamu tokko erga waamee konkolaataan fudhatee deemeen booda achi buuteen isaa dhabamuu isaa maatiifi abokaatonni isaa beeksisuu isaanii xalayaan abbaan alangaa ni ibsa.
Dhimmicha qulqulleeffachuuf jechas gara hoteela inni keessa ture jedhame sanaa imaluun odeeffannoo hoteelicharraa argatan qabatanii, A L I Waxabajji 22, 2010 akka qorannoon isaaniif qulqullaa'uuf gara Komishinii Poolisii Finfinnee kutaa Qorannoo Yakkaa geeffachuu dubbatan.
Haa ta'u malees, ragaa isaanii kennatanii deebii'anillee hanga ammaa maalirra akka jiru akka hin beekneefi achi buuteen isaa dhabamuu isaa iyyannaa dhiyeeffataniin ibsuusaanii xalayaan abbaan alangaa ni ibsa.
Asmaraatti dhalatee kan guddate Ermiyaas nama gaa'ela qabu yoo ta'u, Siwiidin keessa waggoota 12 ol jiraateera.
Ermiyaas firoota isaa Itoophiyaa keessa jiraatan gaafachuuf karaadhma seeraa viizaa argachuun Siwiidiin irraa gara Itoophiyaa dhufuusaa ragaan maatiirraa agrame ni mull'isu. Kanaan duras gara Itoophiyaa dhufee akka beeku maatiin isaa BBC'tti himaniiru.
Taphattoonni kubbaa miilaa Ertiraa Yugaandaatti baqatan 'sodaa keessa jirra' jedhan
Viidiyoo, Tartiiba taatewwanii Itiyoo-Ertiraa